प्रशासनिक तरलतामा सामान्यको चचहुँई - प्रशासन
श्रावण ४ गते, २०७६
विकास, प्रशासन र सुशासनको कुरा दरबारमा त के नै चल्छ र जतिको संवेदनशीलताका साथ भट्टी भट्टीहरूमा गज्जबले चलिरहेको हुन्छ । पंकेसमेत सामेल भएको साँझको साथीभाइहरूसँगको एउटा भेटघाटमा गफगाफ पालैपालो यसरी चलिरहेको रहेछ ।
एक जनाले ह्विस्कीको चुस्की हान्दै भन्दै थिए: नेपालको ईतिहासमा निजामती प्रशासन अहिले जस्तो निस्प्रभावी पहिले कहिल्यै भएको थिएन होला । विगतका प्राय: राजनीतिक संक्रमणमा निजामती प्रशासनले राष्ट्रियताका लागि मियोको भूमिका खेलेको थियो तर आज राजनीतिक परिवर्तनको चरम आकाङ्क्षा पुरा गर्न प्रशासन नै बाधक साबित हुनसक्ने ठुलो शङ्का छ । निजामतीको गौरवमय ईतिहासको पृष्ठभूमिमा उभिएर बदलिएको राजनीतिक व्यवस्थामा नयाँ प्रयोगको अभिलाषासहित आएका जनप्रतिनिधिहरूलाई प्रशासनिक सचेतिकरण र सबलिकरण गर्दै भद्र गतिमा योजनाबद्ध विकासमा सघाउनु पर्ने जिम्मेवारी दिँदा समुचित पुनर्व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा निजामतीलाई भेडाहरूको हुल जस्तै ठानेर अनि ठान्न लगाएर निजामतीको साखलाई गिराएर (त्यसमा पनि प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई त मान्छे नगनेर) स्थानीय र प्रादेशिक नेतृत्ववर्गका समीपमा निजामतीको प्रतिष्ठालाई उत्तानो पारेर घाममा सुकाइएको छ ।
दोस्रोलाई व्यभिचारी संस्कार प्रति वितृष्णा जागेको रहेछ क्यारे, साह्रो बाङ्गीएर कुरा सुरु गर्‍यो: देशमा व्यभिचार अति व्याप्त भयो यार ! सिंहदरवारदेखि स्यालदरबारसम्म, उच्चकोटीका नेता देखी न्युनकोटीका जनतासम्मै पनि विभिन्न रङ्ग र रूपमा व्यभिचार छर्लङ्ग छ । यदि सदाचार कायम गर्नु थियो त जग जाहेर व्यभिचार गर्ने एक-दुई जनालाई समयमै कारबाही गर्नुपर्थ्यो । व्यभिचारिहरुलाई उखेल्न अल्छी मानेर काखीको रौँ जस्तै च्यापेपछी खै के भन्ने । त्यसमा पनि तलका ईकाईहरुमा खडा भएका नयाँ संरचनामा आसीन कतिपय प्रतिनिधिहरूले अमुक कार्यकर्ताहरूको व्यक्तिगत एवं पारिवारिक आवश्यकतालाई सङ्घीयताको संस्थागत आवश्यकता जस्तै मानेर त्यसैअनुसार ढालेर कार्यक्रम र क्रियाकलाप तयार गरेका छन् अरे भन्ने सुनिन्छ । विकास र प्रशासनको सिद्धान्त के हो ? योजना के हो ? सामाजिक आवश्यकता के हो ? कार्यक्रम के हो ? धेरैजसो अबोधजस्ता जनप्रतिनिधिहरूले न बुझेको जस्तो देखिन्छ न त बुझ्नै खोजेको झल्को पाइन्छ । अनि प्रशासन पनि ज्याद्रो सामान्य न पर्‍यो । उसलाई आफ्नै साम्राज्य बिस्तार गर्न पाए र निजामतीभित्रको प्राविधिक र विकासे कर्मचारीहरूलाई कुच्याएर आँफु ठूल्दाई कहलाउन पाए पुग्यो । समुद्रको छाल गन्दै पर्ख र हेरेको संस्कारमा हुर्केकालाई विकासको सवाल बाल !
तेस्रोले अर्कै शिराबाट बोल्दै थियो: नेपालमा जन्मिएका धेरैजसो कर्मचारीका छोराछोरी पनि साह्रो अभागी । आफ्ना बाबु आमाको इमानको कमाइले हुर्किने सौभाग्य तिनलाई कहिल्यै मिलेन । ती अबोध बालबच्चाहरूलाई के थाहा, तिनलाई पाल्नका लागि तिनका बाबुआमाहरूले नेताहरूको दहलिजमा नाक रगडेर खुरापातको भिख माग्दै व्यभिचारले कमाएको कुभिन्डो पकाएर श्रीमतीलाई सुँघाउदै छोराछोरीलाई चटाएर बडो सामाजिक प्रतिष्ठाको फुर्ती फड्फडाएका छन् । तलबले डाईपर फेर्न पुग्दैन तर कमाई सोध्नुस् त हिसाब नै मिल्दैन । अप्सनल म्याथमा टपर हो भन्दैमा हुन्छ र ? कति अभागी सन्तान ! बिचरा बाबुआमाको इमानको पसिनाले कमाएको खान नपाएर ईमान्दारीताको कुपोषण र व्यभिचारको भद्दा हर्लिक्सले दिन-दिन हुर्कदैं छन् । अनि त्यसैगरि समाज पनि फलिरहेको छ ।
चौथोलाई चाहिँ अर्कै चोट रैछ क्यार खै, भन्दै थियो: निजामतीका प्रतिनिधि कहलाउने ट्रेड युनियनका मसिहाहरू हुन् या काला अक्षर रटेकै भरमा वरिष्ठ कहलाएका प्रशासकहरू हुन् या राजनीतिको परिशिष्टाङ्क अनुसार दहिचिउरे भइदिएका विशिष्टहरू हुन् सबैले आ-आफ्नो समयअनुसार व्यभिचारमा उत्तिर्ण भएकै छन् होला क्यारे ! तिनलाई तलबमानको के मतलब । नत्र धेरै भन्दा धेरै कमसलहरूले पनि गैह्रसरकारी जागिरमा मनग्ये तलब कमाएर बसिरहेका छन् । हामी भने यस्तो न्यून तलबमानमा जिल्ल पर्दै अन्याय र अत्याचार सहनुपर्ने । अल्लि पहिले भा’को भए कम्तीमा सामाजिक प्रतिष्ठा त छ भन्न हुन्थ्यो । अहिले लुट्न सक्ने जति सबै त्यतै व्यस्त भएकाले बाँकीलाई पनि समाजले कुनै पवित्र नजरले हेर्दैन ।
पाँचलाई समायोजनको प्रक्रियागत व्यवस्था माथि एलर्जी नै भएको रहेछ क्यारे, रुद्रघण्टीमा केही नअड्काईकन बोल्यो: अहिलेको जस्तो गुनासो नै गुनासोहरूले भरिपूर्ण समायोजन अरू कुनै पनि तवरबाट गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो होला । समायोजनको वेग तारिफयोग्य रहेको भएता पनि अन्ततः: राज्यका श्रोतको अप्रभावकारी खर्च र कर्मचारीहरूको मानसिक तनावको लेखाजोखा हिसाब गर्ने हो भने प्रत्युत्पादक हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अहिलेको युगमा सैद्धान्तिक आधार र वैज्ञानिक कारणहरूसहित कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा निषेधवादी संस्कारको अत्यधिक उपभोग गरी मेलोलाई आधा निम्ठ्याएको छ । अझ उल्टै त्यस्तोलाई स्याबासी थपथपाएको देख्दा यो ज्यानलाई कम्ता निस्पट्ट अन्धकार महसुस भयो होला । हिसाब कसलाई देखाउने ?
छैटौँले भने अर्कै चोट पोख्दै थियो: अत्यधिक कमाई खानको लागि बजारमा मस्त बिकाउको भाउमा रहेका राजनीतिक कार्यकर्ताहरूसँग हाकिमको झोली थाप्दै छटपटाई रहेका ऐतिहासिक निमित्तहरूको पनि प्रशासनमा कहाँ कमी छ र ! व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रशासनको आधारभूत मूल्य मान्यतालाई गलहत्याउदै राजनीतिको हाछ्युलाई आशीर्वाद मानेका छन् । प्रशासनिक व्यभिचारमा उन्मत्त पिङ खेल्ने प्रशासनका भाइरसहरूलाई नाङ्गो बनाएर लखेट्न कसैले सक्या होइनन् । पद्दति नै कन्फ्युज छ कि यो राज्य हो या हाँडिगाँउ ? आफ्ना र आफन्त भइदिन पर्छ, कुर्सि मात्र निमित्त होईन की पेसा र योग्यता नै निमित्त भइदिन्छ । कोही निमित्त वरिष्ठ, कोही निमित्त विशेषज्ञ, कोही निमित्त वरिष्ठ विशेषज्ञ । सबै जायज हुन्छ । मरिलानु के छ र ! निमित्तहरूलाई पनि राम्रै खान लाउन पुगोस् ।
भलिबलको एक टोली जतिले आ-आफ्नो कण्ठ नरोकेपछी वैकल्पिक खेलाडी (एक्स्ट्रा प्लेयर) को रूपमा रहेको पंकेले पनि मन खोल्यो: हेर साथीहरू हो, यो देशमा व्यक्तिगत ओहोदामा बसेका कसैले केही गर्ने वाला छैनन् । सिंह होस या सिंजा होस् या स्याल होस् सबै दरबारमा आ-आफ्नो चाल चलिरहिएको छ । नसा चढेको छ । कसैलाई जनमतको नसा, कसैलाई जन अभिमतको नसा, कसैलाई जनतावादको नसा त कसैलाई जनमुक्तिको नसा । जुन नसालाई हाम्रो मुलुकी भट्टीको दुई गिलासले सम्मै बनाइदिन्छ ।
बनाउनु पर्ने पौरखी जनता थियो, सुती सुती खान दिन्छु भने- अनि भोकै सुताए । उकास्नु पर्ने जनतालाई थियो- देशमाथि सिंगापुर र स्विजरल्याण्ड थोपरे, थेग्न गाह्रो भो- देशमा भुईँचालो र टाईफुन पल्के । विकास फलाके- घाँटी सुक्यो- कुर्सी पिए- आलस्यमा निदाए । बनाउनुपर्ने संस्था थियो, बनाउँछु मान्छे भने- आँफु बने र आफ्नालाई बनाए । समृद्धिको फाउण्डेसन भत्काए – दलको झन्डाले ओत लाग्ने संस्कार बनाए । मुखले बेस्मारी विकास बिगुले, व्यवहारले व्यभिचार अंगाले । व्यभिचार नै खाए- घुटुक्क निले तर पचेन- अनि पखाला लाग्यो । जिवनजल खानको लागि विदेश हान्निए । गरिबले निखनेको कुटोको व्याजमा हुर्केर बनेको ढुकुटी खाईकन पचाउन नसकेर उपचारको लागि विदेश जाँदै गर्दा एयरपोर्टमा हात हल्लाउँदा आँफुलाई भने आँखा छोप्न मन लाउँछ, देख्नै नसकेर के ? तर कसलाई के भन्ने !
पंकेलाई पनि समायोजनको ह्याङ्गओभर रहेछ, अरू थप्यो: परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा नेपालको निजामती सेवालाई एउटा संक्रमणले गाँजेको थियो तर तन्दुरुस्त नै थियो । अफसोच, निजामतीको प्रचलित लिस्नो चढेर बारदलीमा पुगेका महानुभावहरूले लिस्नो त भत्काए ठिकै छ, तर बारदली नै गायब ! त्यो पनि ठिकै छ भने, तर पछि हेर्दै जाँदा त धुरी नै भाँच्दिएका रहेछन् । अनि अहिलेको यो व्यवस्थामा टोल टोलमा उत्पत्ति भएका राजईच्छाहरुलाई प्रशासनिक कार्यात्मक ब्यालेन्स गर्नको लागि निजामतीको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्नेमा डेट एक्सपाएर भएका सामान्य समूहका डाँडापारिका वरिष्ठहरूले तहसनहस पारेछन् । अब त्यसको दूरगामी असरको ऋण बाँकी रहेका निजामतीका नौ जवान र पौरखी हातहरूले तिर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसमा पनि निजामती त जम्मा जम्मी एउटा जागिर न हो, पगार र परिवेश मन नपरे छोडेर हिँडिदेला । अन्ततः: रुने त देश नै हो ।
पंकेले कुरो टुङ्ग्याउन नपाउँदै भट्टी अगाडीको बाटोमा एक जना जाँड सेवनकर्ता तिरिमिरीवाला हिँडाइ हिँड्दै भन्दै थिए: विश्व ईतिहासमा साम्राज्यवादको युग सकिएको जुग भई सक्यो तर प्रशासनिक मूलधारका मसिहाहरूले सङ्घीयताको च्याखे थापेर सामान्यको साम्राज्य बिस्तार गर्नु देशको दुर्भाग्य हो । नेपालका नोटवादी र भोटवादी जमातहरूको अक्कलले त ठम्याउन नसक्ला, तर अब विकासप्रेमी जनताले नपत्याई सुखै छैन । किनकि नेपालको मौलिकता र वर्तमान समयको विशिष्टताले हिसाब गर्दा सामान्य प्रशासनको मिति सक्किईसकेको भान हुन्छ ।
धेरैले भन्छन् की सामान्य प्रशासनमा नवीनतम सोच र तीव्र विकासको गतिलाई पक्रिन सक्ने हैसियत नै छैन । व्यक्ति विशेषको क्षमता त सामान्यमा पनि हुन सक्छ र छ पनि, त्यसमा शङ्का होइन । तर सामान्यको संस्थागत क्षमता भने हास्यास्पद छ । तर पनि, यति महत्वकांक्षी छन् की जे पनि चलाउँछु भन्छन् । अल्लि अस्ति एक जना साथीले सामान्यलाई पाइलटसँग तुलना गरेका थिए तर खासमा सामान्य प्रशासन एउटा सामान्य ट्राफिकको(सभ्य भाषामा भन्दा) सहचालक मात्र हो । उसकै मर्जी हुने हो भने साइकलमा पनि सहचालक बस्छु भन्छ अरे ! शिक्षामा सहचालक, स्वास्थ्यमा सहचालक, कृषिमा सहचालक, वनमा सहचालक, वातावरणमा सहचालक, ईन्जिनियरीङ्गमा सहचालक, उद्योगमा सहचालक अनि विकास प्रशासन त आफ्नै पुर्खाको बिर्ता जस्तो मान्छन्, कति हाँस्नु ।
नत्र हेरुम् त ! तिन वटै सरकारमा सामान्यको दरबन्दी कतिसम्म थप्न सकेको हो । त्यत्रो थप्ने, अनि अहिले भए जति सबैलाई संघमै अटाउँदा पनि संघमै दरबन्दी खालि । खै कसले बोलेका थिए, पहिला स्थानीय अनि प्रदेशको दरबन्दी भरेपछी बल्ल सङ्घमा समायोजन गरिन्छ भन्थे । कोही त जाओ तिनका अनुहारलाई ऐना दर्शन गराइदेऊ । यत्तिको छल गरिसकेपछी प्रदेश र स्थानीयमा खालि रहेका दरबन्दीमा भोलि आफूले राज गर्न पाउने गरी आफ्नै लाइनका तिनै डेट एक्स्पाएर समूहको जन्ती खडा गर्ने अरे ! चाहिँदैन ओ चाहिँदैन, यो असामान्य हुँदै गइरहेको ज्याद्रो सामान्य अब निजामतीमा चाहिँदैन । सङ्ख्या थपेर मात्र हुन्न हजुर गुणस्तरमा जाँउ अब ढिला भई सक्यो ।
ती विन्दास व्यक्तिले सामान्यको प्रवृत्तिलाई मूलबाटोमै त्यत्ति साह्रो त नभनेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो लागेको रहेछ पंकेलाई । सोच्दै थियो: सामान्यले नै देशको निजामतीलाई यसरी एकताको सूत्रमा बाँधेको कुरा बिर्सेछन् क्यारे ब्रो ले । देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, कानुनको कोरा पल्टाउन र प्रशासनिक अभिलेखिकरणका लागि त सामान्य अद्वितीय नै छ नि ! तर अब विकासको माग र रफ्तारलाई नियालेर हेर्दा समग्र निजामतीको भन्दा पनि पहिले सामान्य प्रशासनलाई रिफर्म गर्ने बेला आएको पंकेलाई लाग्न थालेको रहेछ । मनमनै भन्दै थियो: सामान्यको कार्य प्रभावकारीता र व्यवसायिकताको समीक्षा गरौँ । अब अति सामान्य चाहिँ नगरौं ।
केहि बेरमै एक्कासि बज्र हुरी आएछ । भट्टीको टिनको छानो उप्काउन थाल्यो । रक्सीको ग्लासमा धुलो पर्‍यो । जंड्याहाहरु भिजे । दारु भित्रभित्रै उम्लियो । भट्टीमा देश बनाईसकेपछी अब घर बनाउनतिर हिँड्ने सुरसारमा निस्कनै लागेका थिए । तर लाइन गयो । अन्धकार भयो । सबै सम्मै भयो- जे गरे पनि छुट हुने भयो । किनकि नसा चढेको छ अनि लोक अन्धकारमा छ । भोलि बिहानको घामको झुल्कोसम्म त यो भट्टी चिया पसलमा परिणत भई सक्छ अनि जड्याहाहरुको दोष सबै मेटिने छ ।
चैत्र ३० गते, २०७५ - ०७ः३८ प्रकाशित
निजामती पंके प्रशासनिक तरलता समायोजन सामान्य प्रशासन
कागले कान लग्यो…
आर्थिक वर्षको शुभ कामना
श्रावण ३ गते, २०७६
श्रावण २ गते, २०७६
असार २९ गते, २०७६
सम्बन्ध विच्छेदको गलपासो र पारिवारिक विचलन
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०६औँ जन्मजयन्ती
असार २८ गते, २०७६
रवीन्द्र समीरको ‘मृत्युको आयु’ बजारमा
असार २६ गते, २०७६
नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने साहित्य, सङ्गीत र कला हो : राष्ट्रपति भण्डारी
असार २५ गते, २०७६
मदन पुरस्कारका लागि सातवटा कृति सार्वजनिक
सेवा निवृत्त जीवन
असार २४ गते, २०७६
विकास भर्सेस वातावरण
हामीले परिकल्पना गरेको लोकतन्त्र यहीं हो ?
असार २३ गते, २०७६
गर्भावस्था र खतराका लक्षणहरु
कृषिको चरित्र सुधार्न कृषकको चित्र सुधारौँ
आउनुहोस् विरोध गरौँ !
असार २२ गते, २०७६
भए सम्म म खान्छु मेरै देशको उत्पादन
नेपालको निजामती सेवामा रहेका समस्या र आगामी बाटो
असार २१ गते, २०७६
Arithmetical Reasoning Questions
आर्थिक वर्षको शुभ कामना व्यङ्ग्य
काबुल विश्वविद्यालयमा बम विस्फोट, चारको मृत्यु
पाकिस्तानका पुर्वप्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ
जापानको एनिमेसन स्टुडियोमा आगलागी, २४ को मृत्यु
एक लाखको राष्ट्रिय पुरस्कार हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई
इन्टरनेटको बढेको शुल्क फिर्ता गर्न नेता महरको चेतावनी